0 Wednesday July 10, 2019 - 10:17:14
R/wasaaraha dowladda Xabashida Abiy Ahmed ayaa maalintii isniintii ku dhawaaqay in kumanaan kun oo qof ay dowladdiisu udirayso mid kamida dowladaha ugu hantida badan mandiqadda Khaliijka Carabta.
0 Wednesday July 10, 2019 - 10:07:54
Xoogag hubeysan ayaa caawa gudaha magaalada Muqdisho ku dilay ciidamo katirsan sirdoonka dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Tuesday July 09, 2019 - 08:27:46
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in weeraro xooggan ay lakulmeen saldhigyada ciidamada dowladda Kenya ay ku leeyihiin Afmadoow iyo Hoosingoow.
0 Monday July 08, 2019 - 10:48:54
Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in qarax khasaara badan dhaliyay lala eegtay kolonyo ciidamo Xabashi Itoobiyaan ah xilli ay sahay isku gudbinayeen.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubeysan oo maanta lagu qaaday bar koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Sunday July 07, 2019 - 10:05:41
0 Sunday July 07, 2019 - 08:42:38
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horraysay ku hadaaqday hadal muujinayay in maamul goboleedyada dalka ka jira ay u aqoonsantahay dowlado madax banaan.
Maalintii labaad oo Xiriir ah ayaa kooxo Jawaasiis ah lagu dilay gobollada Jubbooyinka ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
0 Thursday July 04, 2019 - 09:23:37
0 Wednesday July 03, 2019 - 09:52:07
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in markale weerar hubeysan lagu qaaday ciidamo katirsan melleteriga Itoobiya oo saldhig ku leh bartamaha Soomaaliya.
0 Wednesday July 03, 2019 - 09:40:10
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal qorshaysan oo ciidamo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay shalay ka fuliyeen deegaan hoos yimaad magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
0 Wednesday July 03, 2019 - 09:38:07
Xaalad adag ayay wajahayaan dalagyada lagu tacban dhul beereed baaxad leh oo kuyaalla deegaanno katirsan gobolka Sanaag.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
0 Sunday June 30, 2019 - 10:42:45
« Prev1 ... 45678910 ... 209Next »